Doorashada Golaha Shacabka oo si gaabis ah uga bilaabaneysa laba ka mida maamul Goboleedyada - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis. Doorashada Golaha Shacabka oo si gaabis ah uga bilaabaneysa laba ka mida maamul Goboleedyada - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Doorashada Golaha Shacabka oo si gaabis ah uga bilaabaneysa laba ka mida maamul Goboleedyada
Maamul Goboleedyadii ugu horeeyay ayaa lagu wadaa inay bilaabaan doorashada kuraasta Golaha shacabka, kadib dib u dhac weyn oo ku yimid Doorashada dowladda Soomaaliya.
Maamulka Hirshabeelle ayaa lagu wadaa inuu qabto doorashada ilaa saddex kursi, waxaana dhinac kale lagu wadaa in Maamulka K/Galbeed uu noqdo maamulka labaad ee qaban doona doorashada Golaha shacabka.
Qaabka doorashada Golaha ku bilaabay si gaabis ah oo la mida Doorashadii Aqalka sare ee qaadatay muddo 4 bilood ah, waxaana kaliya hadda la doortay laba kursi oo ka mida kuraasta Golaha shacabka, kuwaasoo doorashadoodu ka dhacday magaalada Muqdisho.
Diyaargarow loogu jiro doorashada Golaha shacabka ayaa ka socota magaalooyinka Jowhar iyo Baydhaba, waxaana cadaadis xoog leh madaxda maamul Goboleedyada ku haya beesha caalamka, iyadoo laga doonayo inay doorashada soo afjaraan ka hor sanadka cusub ee 2022.
Previous articleHoggaamiyaha Jabhadda Oromada (OLF) oo shaaciyey inay qarka u saaran yihiin Caasimadda Addis Ababa
Next articleSafiirada 15-ka Dal ee Golaha Amniga Midowga Afrika oo Muqdisho kula shiray RW Rooble